Chishanu, January 22, 2021
musha nyika dzakabatana Vatapi venhau Anderson Cooper Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Anderson Cooper Biography inoratidza Chokwadi paChidiki cheKecheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mukomana / Mukomana Wengochani (Partner), Mucheche (vana), Mararamiro, uye Hupenyu HweMunhu.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokupa ongororo yakazara yenyaya yehupenyu yaAnderson Cooper kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakazozivikanwa semutori wenhau weAmerica.
Anderson Cooper Hupenyu Hupenyu Nyaya- Tarisa Hupenyu Hwake hwepakutanga uye mawaniro aakaita Mukurumbira. Instagram: Instagram | AndersonCooper, Pinterest uye WikiCommons.
Kwemakore, kuita kwaAnderson Cooper kwemutori wenhau kwakamuwisira muchiedza chemukurumbira. Hazviite vanofarira Nhau, kunyanya vanyoreri veCNN vanoti havana kumuona vachisimbisa chero terevhizheni. Nekudaro, vazhinji vevateveri vake havanyatso kuziva nezve iyo isingazivikanwe Chokwadi iyo inomira sembiru dzehupenyu hwake.
Verenga pamusoro seChidikiBiography inokuzadza neChokwadi Hupenyu Nyaya yeAmerican mutori venhau uye mutori wezvematongerwo enyika. Pasina kunonoka kukuru, ngatitangei.
Anderson Cooper Nyaya Yemwana:
Makore Ekutanga aAnderson Cooper (Kufanidzirwa kurudyi) - 📷: Instagram | AndersonCooper
Kutanga, Anderson Hays Cooper akazvarwa pazuva re3rd raJune 1967 kuna baba vake, Wyatt Emory Cooper munyori naamai vake, Gloria Vanderbilt mugadziri wemafashoni muManhattan, New York City. Ndiye chete mwana akaberekwa mumubatanidzwa pakati pababa vake naamai vake. Zvisinei, Cooper ane vatatu vakuru hafu-vakoma kubva kuna amai vake vekare hukama.
Masaisai akakomberedza hupenyu hwebasa rake anoita kunge akafanogadzwa nekuratidzwa kwake kwekutanga kune vezvenhau mumazuva ake eUdiki. Chokwadi, mushandirapamwe mudiki akaita yake yekutanga midhiya kuoneka kana mufananidzo wake ukaonekwa pane yeAmerica pamwedzi yemagazini yemafashoni, Harper's Bazaar.
Panguva iyo mukomana wechidiki akange ave nemakore matatu, akaita semueni The Manheru Show mumwedzi waGunyana 1970. Zvinofadza kuti hupenyu hwaive hwakanakira Cooper pamazuva ake ekutanga. Zvikuru, mufaro wekuzviona achionekwa pamaterevhizheni epaTV zvakamupa pfungwa yepamusoro yekuita kunyangwe aive achiri mudiki.
Anderson Cooper Mhuri Dzinobva:
Kutarisa mumadzitateguru ake emadzimai kunopa humbowo hwechokwadi hwekuti amai vake zvechokwadi mupfumi mugari wenhaka ane pfuma inokosha kusvika pamamiriyoni mazana maviri emadhora. Chimwe chinonakidza kuwana ndechekuti sekuru vaCooper vaive milionea. Saka zviri padyo kuti hukuru hunomhanya kuburikidza nemhuri yemutori venhau weAmerica.
Kuzvarirwa mumhuri yakapfuma kudaro, Cooper haana kana kuisa pfungwa dzake pakugara nhaka chero mari kubva kuna mai vake. Kare ikako, amai veAmerican TV muratidziri vaigara vachimunyevera kuti azvivimbe uye awane hupenyu hwunobudirira uye hwakasimbiswa kuburikidza nekuedza kwake.
Anderson Cooper Yemhuri Nhoroondo:
Nekunyatso tarisa Cooper's Mhuri Nhoroondo, takaona kuti kunyangwe achiri mudiki mukomana, aive nemikana mikuru yekubudirira mukutapa nhau. Sezvineiwo, baba naamai vake vese vaive vanyori. Kunyanya kukosha, mhuri yake yaive yakapfuma uye ine simba. Izvi zvinoreva kuti Mhuri yaCooper's inokwanisa kumutsigira mukufunda kosi yake yekurota mune chero chinzvimbo chesarudzo yake.
Anderson Cooper Kukura Pamazuva:
Hupenyu hunofadza hwevechidiki Cooper hwakakurumidza kukanganiswa nezviitiko zviviri zvinosuwisa izvo zvaanoona seakasangana neakasuruvara kwazvo pahudiki. Chekutanga pane zvese, Cooper akarasikirwa nababa vake kumaoko anotonhorera erufu aine makore gumi nerimwe. Chiitiko chinosuwisa chakaitika apo baba vaCoper's vakatambura nhevedzano yekurwiswa kwemoyo panguva yekuvhiyiwa-kwemoyo wakasununguka musi wa11 Ndira 5.
Chipiri, mukoma wake mukuru, Carter Vanderbilt Cooper akafa nekuzviuraya anenge makore gumi mushure mekufa kwababa vake. Zviitiko zviviri izvi zvakatyora Cooper zvakanyanya. Kusuwa kwake uye kusurukirwa mukati menguva iyi zvakange zvakatemerwa pane zvaionekwa pachiso chake.
Mukukanganiswa nenhamo inoshungurudza yakamupwanya, zvakamupawo pfungwa yekutungamira. Muchokwadi, yakanga iri panguva yakaoma iyi apo mubatanidzwa wechidiki akauya nemhedzisiro yekuti pakupedzisira achazoita mukurumbira. Naizvozvo, chiitiko chake chinoshungurudza zvikuru chinoumba kutsunga kutsva uye kutendiswa muhupenyu hwake hwepakutanga.
Anderson Cooper Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Ushingi uye kutsungirira kweiye mudiki weAmerica zvakaratidzwa paakafamba achitenderera Africa parwendo rwekupona. Chokwadi ichi chinoramba chiripo chekuti Cooper akarwara nemarariya kusvika pakuita kuti ave muchipatara muKenya. Tsamba idzi dzese dzakaitika nekuda kwekutanga kwake kupedza chikoro kubva kuDalton Chikoro muUpper East Side nharaunda yeManhattan.
Kutevera kudzoka kwake kubva parwendo rwekutya, Cooper akarondedzera kuti Africa yaive nzvimbo yekukanganwa nekukanganikwa. Nekudaro, rwendo rwake uye rwushingi kwaive kumugadzirira zvishoma nezvishoma iye Hupenyu hwekutarisira munguva yepamberi.
Anderson Cooper Pakutanga Yehupenyu Hupenyu:
Sezvineiwo, achidzidza paYale University uye mukuru musainzi rezvematongerwo enyika, Cooper akadzidzira maserita maviri kuCentral Intelligence Agency (CIA). Nekudaro, ruzivo rwake pane iyo Agency harina kusangana nezvaaitarisira pakutanga.
Pane ichi chinyorwa, Cooper akagadzira pfungwa yake kugadzirisa hupenyu hwebasa rake nekunyepedzera kuita basa reudiki. Kunyangwe iye akange asina kudzidza zvakanyatsojeka munhau, kutsunga kwake kwakamupa kurudziro yekuti aigona kupaza zvisungo zvese kuti awane chero chaanogadzirisa pfungwa dzake.
Kunze kwekufungidzira kwepfungwa huru, wechidiki akasarudzika weAmerica akatanga chirongwa chakazvizivisa chenhau. Kwenguva pfupi, Cooper akavandudza ruzivo rwake nekushandisa basa remutori venhau mune rake junkie.
Anderson Cooper Road kune Mukurumbira Nyaya:
Mushure mekupedza kudzidza kwake kubva kuYunivhesiti yeYale, Cooper akaita kuedza kwake kwekutanga kupinda muhunyanzvi hwekuita zvemitori. Zvine kusuwa, application yake yekuwana yekupinda-level basa neABC yakazova isina kubudirira.
Ichizadzwa netariro, mudiki rookie akabva paChannel Yekutanga paakashanda sechokwadi-nekutarisa ndokupinda muMyanmar aine mapepa ekunyora epasi. Panguva ino kutenderedza, Cooper akasvetukira pamukana mutsva uye akatanga kutengesa yake-yakagadzirwa nhau kuChannel Yekutanga.
Anderson Cooper Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Mumazuva ake eku Rookie mukutapa, Cooper akapedza gore rimwe achigara muVietnam iye achidzidza mutauro weVietnamese paUni University yeHanoi. Makore akati gare gare, akawana basa muABC News uye akazova mubatanidzwa weayo World News Zvino chirongwa muna 1995.
Mukuda kwekutsaudzira basa rake, Cooper akasiya ABC News uye akabatana neCNN mugore ra2001. American Morning. Pasina nguva iri kure, Cooper yakasimuka kupfuura zvisungo zvehumiriri mune zvepasi rose renhau.
Kunge vanoverengeka vanozivikanwa CNN vatori venhau vakaita se Chris Cuomo, Christiane Amanpour, uye Jake Tapper, Cooper akaita zvakawanda zvikuru zvakanaka mukuwana pabasa rake. Nekukurumidza mberi kunguva yekunyora iyi bio, Cooper ndeimwe ye Vepamusoro-Vakabhadharwa Vatori venhau mune indasitiri yekutaurirana. Vamwe vese sezvavari nhoroondo.
Anderson Cooper Ukama Hupenyu Chokwadi; Mukomana, murume, uye Vana:
Kune murume asvika kureba kwakakura kwemukurumbira nehupfumi, kudiwa kwekugara pasi nekurera mhuri yakanaka kunova chinhu chakakosha. Munguva yekutsvaga kwake basa, Cooper haana kugara asina kuroora, pane kudaro akaramba aine hukama hwekudanana nevanhu vaviri vane mbiri.
Kupesana nepfungwa dzako, kuda kwepabonde kwemutori wedu wenhau anozivikanwa weNCN ngochani. Hongu! Kuita zvepabonde kwaCooper kwakaunzwa pachena paakadanana naCesar Recio pakati pemakore 2004 na2009.
Kutevera kurambana kwake naCesar, iyo CNN anchor yakatanga kudanana naBenjamin Maisani kubva muna2009 kusvika pakurambana kwavo kusingabvumike muna 2018. Pasinei zvapo, Cooper ndiye baba vaWyatt Morgan. Zvinoshamisa kuti aive azivisa nezvekuzvarwa kwemwanakomana wake musi wa30 Kubvumbi 2020.
Anderson Cooper Mhuri Hupenyu Hwechokwadi:
Sezvambotaurwa, mhuri yaCooper inosangana nedambudziko rekutambudzika mukati memazuva ake eUdiki. Yake Hupenyu Hupenyu yaizoramba isina kukwana kana tikatadza kutaura nhengo dzemhuri yake idzo dzakamukurudzira nekumutsigira mumazuva ake erima.
NezveAnderson Cooper Baba:
Mumwe nhengo yemhuri yakakosha yaizorangarirwa zvachose neiyo CNN anchor ndiWyatt Emory Cooper, baba vake. Wyatt aive murume wechina waGloria pamwe nababa vaAnderson Cooper. Kuzvarwa musi wa 1 Gunyana 1927, Wyatt akashanda nzira yekukwira pamanheru ekuzivikanwa nekuve munyori ane mukurumbira, Screenwriter, uye mutambi.
Munguva pfupi iyo yaakapedza nemwanakomana wake, Wyatt haana kumboregeredza basa rake rababa. Sezvineiwo, iye nemukadzi wake vakaita nhamburiko yekufumura Cooper diki kumararamiro eiyo midhiya midhiya. Nehurombo, Wyatt haana kurarama mazuva ake ekuona mwanakomana wake achinyanyisa kuve munhu ane mukurumbira uye akakosha munyika zvachose.
About Anderson Cooper Amai:
Mumwe wevanonyanya kukurudzira hunyanzvi hwekunyora hwaCooper ndiamai vake, Gloria Laura Vanderbilt. Aive muAmerican Artist, fashoni dhizaini, socialite mutambi, munyori, uye heiress. Gloria akazvarwa musi wa 20th waFebruary 1924 uye akarasikirwa nehupenyu hwake kumaoko anotonhora erufu musi wa17 Chikumi 2019.
Mushure mekufa kwemurume wake, Gloria akatora basa rekurera Cooper. Akamukurudzira nemashoko emutsa kana asangana nematambudziko akakura uye anomupa rutsigiro rwemari rwese rwaaida paakakura.
Sangana naAnderson Cooper's Mum- Gloria Laura Vanderbilt. Iye ari pamufananidzo akamubata, paakanga achiri mwana. Instagram: Instagram | AndersonCooper
About Anderson Cooper Vakaberekerwa:
Munyori weCNN ane hama nhatu dzinoti Carter Vanderbilt Cooper, Christopher Stokowski, naLeopold Stanislaus Stokowski. Nehurombo, iye neness inorwadza yekufa kwaCarter uyo akatora hupenyu hwake nekusvetuka kubva pauriri hwegumi nepfumbamwe hwefurati. Cooper haawanzo kutaura nezvevakoma vake vanopona.
Sangana naAnderson Cooper's munin'ina mukoma, Carter Cooper (kurudyi) akafa nekuzviuraya makumi emakore apfuura. Instagram: Instagram | AndersonCooper
NezveAnderson Cooper Hama:
Kutarisa mumadzitateguru aCooper kwakaburitsa chokwadi chinonakidza muBiography yake. vanasekuru naamai vake vaive vakapfuma zvakanyanya. Sekuru amai vaamai naambuya ndiReginald Claypoole Vanderbilt naGloria Morgan Vanderbilt.
Kune rimwe divi, vanasekuru vababa vake ndiEmmett Debro Cooper naRixie Annie-Jane Almones Anderson. Chokwadi, Cooper ane hama dzehama, vazukuru uye babamunini pamwe nasekuru nababamunini zvaasingataure nezvazvo kazhinji.
Anderson Cooper Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Nekuda kwechirongwa chakasimba chebasa rake, Anderson Cooper haawani nguva yekuzvigadzirira chikafu chake. Saka, akave fanika yekudya nekukurumidza. Pakati peimwe yehurukuro dzake dzekuratidzira, celeb yekuAmerica yakaratidza kuti haana kurongeka.
Uyezve, Anderson Cooper akataura kuti anga akapindwa muropa neTV kubvira achiri mukomana mudiki. Aigona kukotsira chero kupi uye anowana kunotenga zvekupfeka kunonetsa zvakanyanya. Unoziva here? Cooper haana kana basa nekuimba uye haatomboedza kukuvadza nzeve dzevamwe nekuedza kuimba.
Anderson Cooper Maitiro ehupenyu:
Wakambozvibvunza here kuti anchor yekuAmerica inotambira zvakadii uye kuti anoshandisa mari sei? Zvakanaka, verenga apo isu tichikupa rumwe ruzivo nezve Cooper's Zvemari zvinoitika uye Lifestyle kubva paakakwira kumukurumbira.
Anderson Cooper's Net Kukosha:
Achipedza makore mazhinji muutapi venhau uye achikwira kumatunhu ekuyemura kubva kuvatori venhau, Cooper akaunganidza mari yakawanda kubva pane zvaakaita. Panguva yekunyora kwake Biography, Anderson Cooper's Net Kukosha inofungidzirwa kungangoita madhora zana mamirioni iye achiwana muhoro wepagore we $ 100 mamirioni.
Anderson Cooper's Pfuma:
Kunyangwe Cooper aive awana tani yemari, achiri kugara nhaka yemari inosvika mamirioni 1.5 emadhora kubva kuna mai vake. Kunze kwenhaka yake, Cooper zvakare ane dzimba dzinoverengeka uye mota. Anonyanya kuzivikanwa edzimba dzake dzeMbairo ndeye 1908 Mansion inokosheswa madhora zviuru zvishanu kusvika kumakumi mapfumbamwe emadhora uye rakagadzirwa nemuvaki Wilson Eyre.
Anderson Cooper Untold Chokwadi:
Mumakore mashoma apfuura, zviitiko zvakawanda zvakapidigura hupenyu hwaCooper hwakakodzera kucherechedzwa. Nekudaro, isu tinokupa iwe nezvishoma-zvishoma zvinozivikanwa chokwadi nezve mutori venhau weAmerica izvo zvaizopa kunzwisisa kwakazara kweBiography yake.
Chokwadi # 1: Anderson Cooper's Chiteshi:
Mushure mekugara makore mazhinji achishanda neCNN, Cooper anyora kubudirira kukuru muzviitiko zvake neiyo midhiya midhiya. Kuve mukurumbira wake, mutori wenhau anoregedza Anderson Cooper 360 ° inowanzo shambadzirwa live kubva kuNew York City studio.
Chokwadi # 2: Chitendero chaAnderson Cooper:
Nharo zhinji dzakagara dzichiitika maererano nechitendero chaCooper. Kunyangwe amai vake vaive muKaturike anoshanda, Anderson Cooper haana kutaura chero chinhu pamusoro pechitendero chake kana zvaunotenda. Vamwe vanhu vaiti ndiye Episcopalian. Zvisinei, zvavanotaura pamusoro pezvaaitenda zvinoramba zvisina kujeka.
Chokwadi # 3: Anderson Cooper's Pet uye Zvido:
Iye muverengeri akakurumbira weAmerica anofarira kutamba. Nekudaro, iye haana kufarira kuoneka paTV panguva ipi neipi yaanoimba achitamba. Uyezve, Anderson Cooper ane chinhu kune imbwa. Sezvineiwo, iye ane imbwa yemhuka inonzi Molly. Pashure pazvo, Cooper akazivisa kuti achangobva kuona kuti kitsi zvakare inotonhorera kuva nayo sechipfuyo.
Chokwadi # 4: Anderson Cooper's Hondo Zvakaitika:
Zvishoma nezvishoma Career Buildup yemutori venhau wekuAmerica ndiyo tsananguro yakakwana yeshoko rinoti "Roma haina kuvakwa nezuva rimwe". Unoziva?… Kungofanana Christiane Amanpour, Cooper akaita chaizvo kushanya kune mauto ehondo nechinangwa chekuvhara nhau.
Nekudaro, yake nyaya yaive yakati siyanei neya Amanpour. Se rookie, Cooper pachezvake anoshanyira nzvimbo dzakarwiwa nehondo kuti awane ruzivo nekutengesa kune mamwe maNhau enhau. Mafungiro ake uye zviito zvekushinga zvakagadzira mafambiro ebhuku rake rebudiriro.
Anderson Cooper's Wiki:
Pazasi pane wiki zivobase yeavo vakazvigadzira vatori venhau vekuAmerica. Itafura ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi;
Zita rizere: Anderson Hays Cooper
Zita rekudanwa: Andy
Zuva rekuzvarwa: 3rd June 1967
Nzvimbo yekuzvarirwa: Manhattan, New York City
Baba: Wyatt Emory Cooper
Amai: Gloria Laura Vanderbilt
Vanun'una: Carter Vanderbilt Cooper, Christopher Stokowski, naLeopold Stanislaus Stokowski
Muhoro: $ Miriyoni 12
Basa: Mutapi wenhau, TV Presenter, uye Model
kukwirira: 1.78 m - mumamita
Pet: Imbwa (Molly)
Kuti tiunze Nhoroondo yeUpenyu yaAnderson Cooper kusvika kumagumo, zvakakosha kuti tizive kuti Hupenyu hwake hwakatiratidza kuti tinogona kuzviumba kuti tive zvatiri kuda kuva. SaDr Ben Ben Carson, Cooper akavimba zvizere mukugona kwake. Naizvozvo, akazvishandira kuva hunhu hunoremekedzwa muindasitiri yekutaurirana.
Kupinda mukutarisana nematambudziko ehupenyu, isu zvakare tinogona kuita kutendeuka kukuru muhupenyu hwedu pese patinoisa pfungwa dzedu kune chakanangwa chinangwa. Ndinovimba makafarira Nyaya yacho. Usakanganwe kurarama komendi kana ukasangana nechinhu chinoita senge chiri muchinyorwa.
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 7, 2020